विविकशिल नेपाली दल मकवानपुरमा पाठक
२ पुस, हेटौंडा । बिवेकशिल नेपाली दल मकवानपुरको अध्यक्षमा रबिन पाठक चयन भएका छन् । दलको शनिबार भएको जिल्ला भेलाले पाठकको अध्यक्षमा जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको हो । दलको व्यवस्थापिका प्रमुखमा निमार्ण न्यौपाने, कार्यपालिका प्रमुख सुजन मल्ल, न्यायपालिका प्रमुख कृष्णदेव भण्डारी, व्यवस्थापिका सदस्य मिलन ढकाल र नवीन तिमल्सिना रहेका छन्...
४ नम्बर क्षेत्रमा नयाँँ शक्तिको अभियान
२ पुस, हेटौंडा । ‘घरघरमा नयाँँ शक्ति’ अभियानअन्तर्गत नयाँँ शक्ति नेपाल पार्टी मकवानपुरले ४ नम्बर क्षेत्रमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । शनिबार भएको बैठकले ४ नम्बर क्षेत्रअन्तर्गतको प्रस्तावित ३ वटा गाउँँपालिकामा अभियान सञ्चालनको लागि संयोजक तोकेको छ । मनहरी गाउँपालिकामा प्रकाश मैनालीलाई संयोजकको जिम्मेवारी...
हेटौंडा-१० मा कांग्रेसको भेला
२ पुस, हेटौंडा । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरको संगठन सुदृढीकरण अभियान अन्तरगत हेटौंडा-१० मा भेला सम्पन्न भएको छ । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरका कोषाध्यक्ष गोपिलाल विश्वकर्माको प्रमुख अातिथ्यता एवम् वडा सभापति कालू घलानको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा नगर सचिव दीपकलाल खतिवडा, क्षेत्रीय प्रतिनिधि भुवनलाल श्रेष्ठ, रमेशध्वज...
'घरघरमा नयाँ शक्ति' अभियान सञ्चालन हुने
२९ मंसिर, हेटौंडा । नयाँ शक्ति पार्टी मकवानपुरले अबको ६ महिना घरघरमा नयाँ शक्ति अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । पार्टीको मंगलबार बसेको मकवानपुर जिल्ला कार्यकारी समितिको बैठकले पार्टीको केन्द्रीय तथा ३ नम्बर प्रदेशको परिपत्रअनुसार मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालन गर्ने ६ महिने अभियानअन्तर्गतको कार्यक्रम तय गरेको हो । अभियान सफल बनाउन...
शहरी विकास मन्त्री केसी भारत प्रस्थान
२८ मंसिर, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसी मंगलबार भारत प्रस्थान गरेका छन् । भारतकाे राजधानि नयाँ दिल्लीमा मंसिर २९ देखि पुस १ गते सम्म हुने एशिया प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरुकाे शह विकास तथा अावास सम्बन्धी छैठौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागि हुन मन्त्री केसि त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । सम्मेलनमा...
संसद सुचारु हुने वातावरण तयार गर्नुस्ः सभामुख घर्ती
२५ मंसिर, काठमाण्डौं । सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद सुचारु हुने वातावरण तयार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह गरेकी छिन् । उनले दलहरुबीचको छलफललाई तिब्रता दिएर संसद सुचारु हुने वातावरण बनाउन दाहाललाई आग्रह गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार विहान भएको छलफलमा सभामुखी घर्तीले विभिन्न विधयेक पारितको काम...
राष्ट्रिय हितमा अहिलेको संशोधन सच्याउनुपर्छ : बाबुराम भट्टराई
२५ मंसिर, हेटौँडा । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले संसदमा पेश भएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रिय हितमा हुने गरी सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । हेटौँडामा पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा बोल्दै नेता भट्टराईले राजनैतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संसदमा पेश भएको प्रस्तावलाई सबै पक्षको माग सम्बोधन र राष्ट्रिय हित हुने गरी संशोधन...
डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पोखरामा जुत्ता प्रहार
२३ मंसिर, पोखरा । नयाँ शक्तिका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई लक्षित गरेर पोखरामा जुत्ता प्रहार भएको छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसका एक विद्यार्थीले उनलाई लक्षित गरि जुत्ता प्रहार गरेका हुन् । पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षका सञ्जिव भट्टराईले बाबुरामलाई लक्षित गरी...
किन गए बाबुराम र उपेन्द्र वालुवाटार ?
१९ मंसिर, हेटौंडा । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बालुवाटार पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराई र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका यादव वालुवाटार पुगेका हुन् । तीन शीर्ष नेताको भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल...